Semalt: Free web scraper ho an'ny programera
Ny safidy dia tianao ny API ofisialy. Na dia izany aza, misy ny tranokala sasany ao amin'ny aterineto izay ahafahanao manao ny asanao mora kokoa, ary amin'ny maha-programa na mpamolavola anao, dia afaka mamoaka ny angona avy amin'ny toerana maro araka izay tianao ianao.
1. Ny mpanodina amin'ny data:
Data Scraper dia programa tsotra sy maoderina ary ilaina. Tsy vitan'ny hoe mametaka sary sy soratra fotsiny izy io, fa mandinika ny lisitra sy ny latabatra avy amin'ny pejy tokana na maromaro. Avy eo, ity fitaovana ity dia manova na mamonjy ny angona rakitra ao amin'ny XLS sy CSV. Tsy misy vidiny izany ary avy amina karazan-javatra maro. Na izany aza, ireo mpampiasa mpandrindra sy mpikaroka matihanina dia tokony hampiasa ny karaman'ny volavolan-dalàna izay tonga amin'ny karazan-javatra maro ary tsy mitaky koditra.
2. Tratra anaty tranokala:
Web Scraper dia fampitahana Chrome izay mora mora tafiditra amin'ny navigateur Google Chrome. Izany dia ahafahan'ny mpampiasa mamorona sitemaps mba hampisehoana ny fomba tokony hivezivezin'ny tranokala iray sy ny karazan-doka tokony hotsikao. Ny mpandrindra sy ny mpandrindra dia mila ampidirina ao amin'ny Chrome ihany ary manomboka mamoaka angon-drakitra.
3. Ny mpangalatra:
Raha mikasika ny fandrindrana ny angona angona, ireo mpamolavola sy mpandrindra dia tsy maintsy miatrika fanamby maro. Na izany aza, miaraka amin'ny Scraper, ny asany dia azo atao haingana sy mora kokoa noho ny hatramin'izay. Ity dia mora entina ampiasain'ny tranonkala afaka mamoaka ny angona amin'ny endrika latabatra, sary, lisitra, ary lahatsoratra. Mila mametaka fotsiny ny bokotra Scrape avy ao amin'ny sakafo ambony havanana ianao ary avelao ity fitaovana ity hanao ny asany.
6. Ny mpandinika Visual:
Visual Scraper dia tsara ho an'ireo izay te hamoaka sary sy horonan-tsary. Izy io dia mpangalatra amin'ny tranonkala maimaim-poana izay miaraka amin'ny fomba tsotra sy teboka kely ary ampiasaina betsaka mba hanangonana angona azo antoka avy amin'ny aterineto. Hahazo ny angon-drakitra avy amin'ny pejy tianao ianao ary manondrana azy amin'ny endrika XML, CSV, SQL, ary JSON.
Ity freeware ity dia misy karazany maro ary mifanaraka tsara indrindra amin'ny Windows, Linux sy ny rafitra hafa miasa. Hamela anao hanangona angon-drakitra avy amin'ny pejy maherin'ny dimampolo arivo. Na izany aza, ny dikan-drakitra voalohany dia afaka mamafa pejy maherin'ny 130,000 tsy misy olana.
Antsoina koa hoe CloudScrape, Dexi.io dia tranokala malaza amin'ny tranonkala. Mamela ny mpampiasa hanakona ny angon-drakitra ary manome karazana robots telo izy ireo mba hahazoana ny asa vita mora. Azony atao ny manatanteraka asa mifandraika amin'ny fitsangatsanganana, ny fitrandrahana ary ny fanodinana daty.
Webhose.io dia freeware izay manome antsika mpizara tranonkala tsy fantatra anarana ary mandray ny asa atao faran'izay haingana. Tsy natao hikapoka afa-tsy ny tranonkalanao ihany koa izy io fa ahafahanao manangona angon-drakitra; Midika izany fa tsy voatery hiahiahy momba ny fahaverezan'ny vaovao mahasoa ianao raha toa ka ho voavonjy ao amin'ny takelaka Archive izy io Source .